Dib u eegista Widget Video Magnifi: Ku dar Wicista Fiidiyowga WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Dib u eegista Widget Video Magnifi: Ku dar Wicista Fiidiyowga WordPress
Dib u eegista Widget Video Magnifi: Ku dar Wicista Fiidiyowga WordPress
Raadinta xal aad ku dhex galiso wicida fiidyaha ee goobtaada WordPress?
Dib-u-eegisga Widget-ka Magnifi Video-ga, waxaanu ku tusi doonaa sida adeeggan iyo plugin-kuba ay kaaga caawin karaan inaad ku darto wicitaanka fiidyaha ee goobtaada codsiyada kala duwan sida:
Adiga ama booqdayaashaada waxaad ka bilaabi kartaan shirar goobtaada waxaadna awood u yeelan doontaan inaad habayn karto is dhex galka kulanka si uu u dhigmo sumadayntaada, kaas oo abuuraya waayo aragnimada wicitaanka fiidyaha.
Haddii taasi u muuqato mid xiiso leh, sii wad akhrinta buuxda ee Magnifi Video Widget dib u eegista si aad wax badan uga barato plugin/adeegan iyo sida uu u shaqeeyo.
Dib u eegista Widget Video Magnifi: Liiska Tilmaamaha
Magnifi waa adeeg bixiya wacitaanka fiidyaha la beddeli karo. Ka fakar sida Zoom ama Google Meet laakiin ku jira xirmo is-summadeed oo la beddeli karo oo aad ku dhex dari karto WordPress.
Adigoo isticmaalaya plugin-ka go'an iyo widgets-keeda, waxaad si dhaqso ah u habeyn kartaa:
Kulamo dhaqameed oo aad isla markiiba bilaabi karto kulan oo aad dadka ku casuunto iimaylka ama SMS.
Shirarka la qorsheeyay ee dhacaya wakhti go'an mustaqbalka, oo leh xulashooyinka martiqaadka isku mid ah.
Waxa kale oo aad u ogolaan kartaa dadka kale inay codsadaan shirar, oo ay ku jiraan habaynta helitaankaaga iyo u ogolow dadka inay wakhti qabtaan.
Ama, haddii aad rabto inaad u isticmaasho wicitaanka fiidyaha taageerada macaamiisha, waxaad u oggolaan kartaa macaamiishaada inay soo wacaan fiidiyowyada oo ay ka jawaabaan wicitaannada dashboardka Magnifi. Haddii aadan u joogin inaad ka jawaabto wicitaanka, waxaad tusi kartaa isticmaalayaasha foom ballansan, soo bandhig foomka xiriirka, ama u wareejin kartaa bog kasta oo caado ah oo ku yaal boggaaga.
Marka laga soo tago sifooyinka kore, waxaad sidoo kale heli doontaa dhammaan sifooyinka wicitaanka fiidyaha ee ah in aad filayso oo ay ku jiraan:
Nambarada garaac si ay dadku uga soo wacaan telefoonadooda.
Magnifi waxa ay taageertaa ilaa 50 qof shirkiba waxa uuna kuu ogolaanayaa in aad qabato shirar ilaa afar saacadood ah.
Sii wad akhriskayaga dib u eegista Magnifi oo dhamaystiran si aad u eegno faahfaahsan sida ay u shaqeyso.
Gacan-ku-qaadashada Qalabka Fiidiyowga ee Magnifi
Si aad u maamusho kulammadaada iyo goobahaaga, waxaad inta badan ka shaqayn doontaa dashboard-ka daruuraha Magnifi – plugin-ka WordPress waxa ugu horrayn loogu talagalay isku-xidhka Magnifi iyo goobtaada.
Markaad rakibto oo aad ka shaqeysiiso fiidiyaha Magnifi Widget plugin ka WordPress.org, waxaad heli doontaa mid cusub oo go'an Cajiib tab ee dashboardkaaga WordPress.
Marka ugu horraysa ee aad furto tab-ka, waxa ay kugu soo jeedin doontaa in aad gasho akoonkaaga Magnifi. Haddii aadan lahayn koontada Magnifi, waxaad iska diiwaan gelin kartaa mid ka mid ah halkan - Waxaan ka hadli doonaa qiimeynta dambe, laakiin waa inaad ogaataa inay bilaash tahay inaad isdiiwaangeliso oo aadan u baahnayn inaad gasho kaarka deynta:
Fahamka Magnifi Shortcodes
Markaad soo gasho, pluginku wuxuu tusi doonaa kood gaaban oo kala duwan oo aad isticmaali karto si aad u muujiso noocyada kala duwan ee nuxurka. Waxaad helaysaa lix habayn oo hore loo diyaariyey.
Saddexda hore waa ujeeddo guud:
Kulan degdeg ah – isla markaaba kulan bilow oo dadka ugu yeedh SMS ama iimaylka.
Jadwalka Kulanka Mustaqbalka - Waxaad ballansan kartaa kulan taariikh mustaqbalka ah oo aad dadka ku martiqaadi kartaa SMS ama iimaylka.
Codso kulan - Tani waxay ku lug leedahay jadwal dadweyne oo macaamiishaada/macaamiishaadu isticmaali karaan si ay u codsadaan kulanka mustaqbalka ee martida loo yahay. Martigeliyaha ahaan, waxaad awoodi doontaa inaad dejiso helitaankaaga caadada u ah.
Saddexda labaadna waxay diiradda saarayaan adeegsiga Magnifi ee taageerada macaamiisha:
Codso kulan (Taageerada macaamiisha) - nooca taageerada macaamiisha diirada saaraya oo u oggolaanaya dadka inay isla markiiba soo wacaan. Wicitaannada la seegay waxaa loo diraa bog gaar ah halkaas oo qofka soo wacaya uu ku ballansan karo dabagal waqti gaar ah.
Waddada Foomka Fariinta - oo la mid ah kuwa kor ku xusan, laakiin wicitaanada seegay waxaa loo gudbiyaa foomka fariinta halkaas oo kuwa soo wacaya ay kaga tagi karaan faahfaahintooda xiriirka iyo fariin gaaban.
U jiho bogga mareegaha - la mid ah kan sare laakiin waxaad u hagaajin kartaa wicitaanada seegay bog shabakad gaar ah (sida foomka xiriirka caadada kuu ah).
Waxa kale oo aad samayn kartaa habayn adiga kuu gaar ah (taas ayaa ku xigta) – kuma koobna kaliya lixdan horudhac.
Habaynta Magnifi Shortcodes
Dhab ahaantii waxaad bilaabi kartaa inaad isticmaasho koodka gaaban ee Magnifi isla markaaba. Laakin qaar ka mid ah summada-gaaban, waxaad u badan tahay inaad u baahan tahay inaad habayso sida ay marka hore u shaqeeyaan.
Si aad u habayso lixda widgets/koodka gaaban, waxaad isticmaali kartaa shabakada Magnifi. Gudaha Maareynta qalabka aagga, waxaad arki doontaa isla lix nooc oo widgets ah, oo ay la socdaan ikhtiyaarrada aad ku beddeli karto mid kasta:
Markaad wax ka beddesho widget-ka, waxaad awoodi doontaa inaad:
Xakamee waxa shaqeynta loo ogol yahay widgetkaas.
Habbee calaamadaynta adiga oo ku dara astaantaada oo beddel midabada.
Ku hagaaji qoraalka isku xirka wadaagga kulanka.
Dooro xubnaha kooxda ka jawaabi kara wicitaanada soo socda (wax badan oo arrintan ku saabsan ilbiriqsi gudaheed).
Xakamee goobaha muhiimka ah sida duubista kulanka, haddii martigeliyaha looga baahan yahay inuu bilaabo kulanka, iyo haddii aad rabto inaad bixiso lambarka garaaca si ay dadku u soo wacaan.
Dooro waxa dhacaya haddii uu jiro wicitaan la seegay.
Dejinta la heli karo waa isku mid iyadoon loo eegin widget-ka aad tafatirayso:
Waxa kale oo aad samayn kartaa habayn kuu gaar ah marka lagu daro lixda khaladaad adigoo gujinaya Widget cusub. Markaad taas sameyso, widget-kaas wuxuu heli doonaa koodka gaaban ee u gaarka ah ee dashboardkaaga WordPress.
Ku darida Xubnaha Kooxda
Haddii aad dad badan ku leedahay kooxdaada/oo aad rabto inaad awood u yeelato inaad martigeliso oo aad ka jawaabto shirarka, waxaad ku dari kartaa adiga oo tagaya Dejinta → Maamulka Dadka gudaha dashboardka Magnifi:
Haddii aad isticmaalayso widgets u ogolaanaya macaamiishaada/macaamiishaadu inay codsadaan shirar (tusaale taageero macmiil), waxaad xakamayn kartaa helitaanka adiga iyo xubnaha kooxdaada adiga oo aadaya Dejinta → Helitaanka.
Halkan, waxaad dejin kartaa sharciyo helitaan aan xadidnayn, oo ay ku jiraan ku darista waqtiyo badan oo hal maalin ah (si aad u tidhaahdo, qadada u naso):
Tafatirka Shaashada Dhammaadka Kulanka
Waxyaabo kale oo qurux badan oo wax ka beddelka ah oo Magnifi ogolaado ayaa abuuraya shaashad dhamaadka caadada u ah shirarka la dhammeeyay.
Waxaad ku hagaajin kartaa tan markaad tagto Dejinta → Wax ka beddel Shaashada Dhamaadka. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku darto macluumaad faa'iido leh, oo ay ku jiraan CTA-yada, iwm.
Xakamaynta Isku-dhafka Jadwalka
Ugu dambeyntii, aan eegno goobaha jadwalka, taas oo aad ka heli kartaa hoos Isku dhafka jadwalka. Waxaad isticmaali kartaa kalandarka gudaha ku dhex jira ee Magnifi ama Magnifi waxa kale oo uu ku daraa Calendly haddii aad doorbidayso inaad isticmaasho:
Isticmaalka Magnifi ee WordPress - Kulamada Aasaasiga ah
Hadda oo aan daboolnay inta badan goobaha muhiimka ah ee dashboard-ka Magnifi Video Widget, aynu eegno sida ay u eg tahay martigelinta shirarka boggaaga WordPress - laga bilaabo kulan degdeg ah oo aasaasi ah.
Si aad u bilowdo, waxaad ku dari doontaa summada gaaban ee kulanka degdegga ah halkaas oo aad rabto in foomka kulanku ka soo muuqdo:
Dhinaca hore, tani waxa ay abuurtaa foom aad ku martiqaadi karto dadka kale kulanka adiga oo gelaya iimaylkooda ama telefoonadooda. Kadib waxay heli doonaan fariin iyaga ku casumaysa kulanka (Kaas oo aad habayn karto adiga oo tafatiraaya goobaha widget-ka ee dashboard-ka Magnifi).
Tani waxay sidoo kale furi doontaa interface interface. Kulanka laftiisa waxaa lagu marti galiyay URL Magnifi, laakiin waxaad habayn kartaa midabada bogga iyo calaamadaynta - waxaad arki kartaa inaan doortay asal cad oo waxaad sidoo kale arki kartaa summada Duqa WP ee dhanka sare ee midig:
Waxa kale oo aad arki kartaa suulkayga weyn sababtoo ah goobaha timaha lagu qurxiyo ayaa xidhnaa Vietnam bilihii la soo dhaafay timuhuna way kacsan yihiin. - taasi waa aniga oo ka dambeeya suulka, in kastoo.
Waxa kale oo aad helaysaa dhammaan kontaroolada kulanka ee aad filayso oo ay ku jiraan daminta maqalka/muqaalka, ku hadalka qoraalka, duubista kulanka, iwm.
Markaad ku biirto kulanka, waxa kale oo aad heli doontaa door cusub oo aad ku wadaagto shaashadaha. Waxaad isticmaali kartaa kontaroolada gudaha ku dhex jira ee Chrome, kaasoo kuu ogolaanaya inaad wadaagto tab ama daaqad kale. Hoosta, waxaad arki kartaa inaan shaashada wadaagayo tab browser ka duwan oo leh shabakada WP Mayorka oo furan:
Si aan u tijaabiyo shaqada kulanka, waxaan naftayda ku casuumay kombuyuutar kale, wax walbana waxay u muuqdeen inay si fiican u shaqaynayaan - ma aanan la kulmin wax dib u dhac ah ama iftiin leh.
Markaa taasi waa shaqada aasaasiga ah ee kulanka - aynu eegno qaar ka mid ah xulashooyinka kulanka gaarka ah, sida codsiyada kulanka iyo taageerada macaamiisha.
Isticmaalka Codsiga Widget Kulanka
Codsiga widget-ka kulanka, booqdayaashu waxay heli doonaan foom ballan-qaad ah oo dhammaadka-hore ah halkaas oo ay ku qabsan karaan kulan ku salaysan helitaankaaga:
Muddada kulanka caadiga ah waa hal saac, laakiin ma aan awoodin inaan helo goob aan ku beddelo taas, taas oo aan filayo inay faa'iido leedahay si dadku ay u galaan muddada caadada ah.
Waxaad awooddo deji waqti gaar ah haddii aad wakhti hore kulan ku ballansato mareegaha Magnifi - Kaliya ma helin fursad aan tan ku hagaajiyo widget-ka ballansashada WordPress.
Isticmaalka Widgets-ka Adeegga Macmiilka
Qalabka taageerada macaamiishu waxay la mid yihiin widgets-yada kale - farqiga kaliya ayaa ah waxa dhaca ka dib iyo sida aad uga jawaabto codsiyada.
Marka hore, qofku wuxuu codsan karaa kulan isagoo buuxinaya foom gaaban. Uma eka inaad wax ka beddeli karto qoraalka foomka, taas oo ku fiicnaan lahayd inaad gasho:
Marka booqde uu bilaabo wicitaan, waxaad maqli doontaa dhawaaq oo waxaad arki doontaa degdeg gudaha dashboardka Magnifi. Haddii aad ka jawaabto, waxay bilaabi doontaa wicitaan muuqaal ah:
Haddii aadan ka jawaabin, booqdayaashu waxay arki doonaan doorashooyin kala duwan iyadoo ku xiran summada gaabanTusaale ahaan foom ballan-qaad ah, u jihdi bogga internetka, foomka xidhiidhka, iwm).
Si aad u hubiso inaad had iyo jeer u dhowdahay inaad ka jawaabto, waxaad u baahan doontaa inaad ka tagto dashboardka Magnifi oo furan. Ma jiraan barnaamijyo u go'ay desktop-ka ama mobilada wakhtigan. Marka la eego taas, way fiicnaan lahayd in halkaas lagu haysto dashboard-ka loo qoondeeyay si loo helo wicitaanno. Waqtigan xaadirka ah, wicitaanada soo galaya kaliya ayaa soo booda meel kasta oo aad joogtid dashboard-ka.
Qiimaha Widget Video Magnifi
Magnifi waa bilaash ah ilaa 5 martigaliyayaasha si loogu isticmaalo wicitaanada fiidyaha aan xadidnayn. Markaa, goob gaar ah ama koox yar, waxaad samayn kartaa wax kasta oo aad kor ku aragtay bilaash.
Isticmaalka ganacsiga (ie in ka badan 5 martigaliyayaasha), Magnifi waxa ay leedahay qorshayaal gaar ah oo ku salaysan tirada wakiilada aad ka jawaabi doonto wicitaanada iyo kakanaanta habayntaada - waxaad la xidhiidhi kartaa iyaga si aad ugala hadasho qiimaha bogga qiimaha.
Fikirka ugu dambeeya ee Qalabka Fiidiyowga Magnifi
Waxaan u maleynayaa inaad ka faa'iideysan karto Magnifi Video Widget runtii waxay kuxirantahay waxaad ka raadineyso aaladda kulanka khadka tooska ah. Sida iska cad, aaladaha ay ka midka yihiin Zoom iyo Google Meet ayaa ah kuwa qaladka ah, marka haddii ay tahay inaad isticmaasho Magnifi runtii waxay kuxirantahay inaad u baahan tahay astaamaha gaarka ah ee Magnifi bixiyo.
Waxaan dhihi lahaa sifooyinkaas waa:
Isdhexgalka WordPress ee u go'ay si aad u dhexgeli karto noocyo kala duwan oo shirar ah goobtaada.
Ikhtiyaarka ah in lagu habeeyo is-dhexgalka kulanka midabadaada iyo astaantaada si aad u abuurto khibrad sumad leh oo ka badan kuwan qalabka dhinac saddexaadinkastoo wali lagu hayo URL Magnifi).
Buuxinta kalandarka la dhisay iyo helitaanka si aadan ugu baahnayn inaad isticmaasho qalabka dhinac saddexaad.
Codsiyada adeegga macaamiisha u go'ay, kuwaas oo Zoom iyo Google Meet aan si dhab ah diiradda loo saarin.
Markaa haddii astaamahaas ay muhiim kuu yihiin, Magnifi Video Widget-ka ayaa kaa caawin kara inaad dejiso shaqadaas adigoo weli gelaya astaamaha shirarka fiidiyowga ee muhiimka ah sida:
Ku biiritaanka kulanka adigoo wacaya nambar.
Jadwalka kulanka ka hor.
Ku martiqaad ka qaybgalayaasha SMS ama iimayl.
Sidoo kale waa lacag la'aan - markaa ma jirto wax khatar ah in la arko haddii ay kugu habboon tahay.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso, waxaad isticmaali kartaa badhanka hoose:
Liiska Plugin ee WordPress.org
10-ka ugu Fiican WooCommerce Multi-Vendor Plugins si loo bilaabo Dukaankaaga Ecommerce
11 siyaabood oo uu Bakhaarkaaga Onlineka ah kula tartami karo Mega-Tafaariiqlayaasha (oo ku guulaysta)